क्यान्सरको जोखिम भएका यी खानेकुराहरु | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepalक्यान्सरको जोखिम भएका यी खानेकुराहरु
Home स्वास्थ्य क्यान्सरको जोखिम भएका यी खानेकुराहरु
काठमाडौं : क्यान्सर प्राणघातक रोग मानिन्छ । यो रोग विभिन्न कारणले लाग्छ । जसमध्ये केही मात्रामा मानिसहरुको खानेकुरा पनि एक कारण हो । त्यसैले क्यान्सरबाट बच्न खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ क्यान्सरको जोखिम भएका केही खानेकुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।
१. रातो मासु
रातो मासुले पनि क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ । रातो मासुमा हुनसक्ने हाइड्रोकार्बन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिन्छ ।
विकल्प : सकेसम्म रातो मासु नखाने । रातो मासु नै खानुपर्ने भए पकाउँदा विशेष ध्यान दिने ।
२. कृत्रिम चिनीहरु
चिया, कफी बनाउन वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि राखिने कृत्रिम चिनी पनि क्यान्सरको कारक हो । केही अध्ययनले यस किसिमको उत्पादन निकै हानिकारक हुनसक्ने देखाइसकेको छ । विकल्पः कृत्रिम चिनीको भन्दा पनि प्राकृतिक उत्पादनको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
३. बन्द भाँडोमा राखिएको टमाटर सस
बन्द भाँडोमा धेरै समयसम्म राखिएको टमाटरको सस पनि क्यान्सरको एक कारक हो । टमाटर सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्यवर्धनक नै हुन्छ तर यसलाई प्याक गरेपछि भने समस्या आउनसक्छ ।
रक्सी क्यान्सरको कारक भन्ने कुरा त धेरैलाई थाहा होला । रक्सीको कारण घाँटी, कलेजो, छातिजस्ता स्थानको क्यान्सरको जोखिम बढी हुन्छ । विकल्पः यदि रक्सी साँच्चै छाड्न चाहने हो भने त्यसको मात्रा बिस्तारै घटाउँदै लैजानुपर्छ ।
५. प्रशोधित सेतो पीठो
प्रशोधित पीठोमा सेतो रङको लागि क्लोरिन ग्यासको प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसले उत्पादनलाई क्यान्सरको जोखिमयुक्त बनाउँछ । विकल्पः आफ्नै उत्पादनको गहुँको पीठोको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
बजारमा पाइने सोडायुक्त पेय पदार्थले क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ । यसमा प्रयोग गरिएको ४–एमईआई रसायनको प्रयोग गरी पेय पदार्थलाई एक रङ प्रदान गरिन्छ । यो क्यान्सरको कारक मानिन्छ । विकल्पः यसको विकल्पमा पानी सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । यदि स्वाद भएकै पेय पदार्थ मन पर्छ भने विना कुनै रङको प्राकृतिक ब्राण्डको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
आलुचिप्स धेरै मानिसहरुलाई मनपर्ने खानेकुरा हो । यद्यपि यसले मानिसको स्वास्थ्यमा भने नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ ।
८. रसायन प्रयोग गरिएको फलफूल र तरकारी
फलफूल तथा तरकारी आफैंमा स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा हुन् । यस किसिमका उत्पादनहरुमा रसायनको प्रयोग गरिने हुँदा रसायन प्रयोग गरिएको फलफूल तथा तरकारी नखानु् श्रेयस्कर हुन्छ । विकल्पः सकेसम्म आफ्नै बारीमा फलेका उत्पादनहरु खाने र खानुअघि राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ ।
बृहत स्वास्थ्य शिविरमा उपचार गर्ने गएका एक ब्यक्तिको लडेर मृत्यु